काकीसँग मैले नियमित सम्बन्ध दिइरहदा समेत अरुसँग पनि सम्बन्ध छ भनेपछि सह्य भएन, अनि सि’ध्याएँ – Online Nepal Site
आज फेरि यति बढ्यो सुनको मूल्य ! हेर्नुहोस तोलाको कति पुग्यो…
टिकटकका कारण भेटिए २४ वर्षअगाडि छुट्टिएका जुम्ल्याहा दिदीबहिनी, थामिएन आँशु (भिडियो हेर्नुस्)
यस्तो छ आजको दशैँ टिकाको शुभ साइत !
अचम्मको प्रतिभा भएकी ७ बर्षिय नानी रबिनाको सबैलाई चकित पार्ने दोहोरि, हेर्नुहोस कमला र आयुषालाइ पनि पछारिन, सबै चकित
दशैको मुखमा दाङमा फेरी के गरिन महिलाले यस्तो ? दुधे बालकलाई पनि बाँकी राखिनन् आमाले(भिडियो)
रोयल इन्फिल्ड बाइक किन्दै हुनुहुन्छ, निकै सस्तो मूल्यमा आउँदै नयाँ मोडलको ‘बुलेट’ यस्तो छ मूल्य(भिडियो)
मुख्य पृष्ठ /News/काकीसँग मैले नियमित सम्बन्ध दिइरहदा समेत अरुसँग पनि सम्बन्ध छ भनेपछि सह्य भएन, अनि सि’ध्याएँ
काकीसँग मैले नियमित सम्बन्ध दिइरहदा समेत अरुसँग पनि सम्बन्ध छ भनेपछि सह्य भएन, अनि सि’ध्याएँ
1,8522minutes read
काठमाडौ । ललितपुरको चुनीखेलकी गीता केसीको लाश भेटिएपछि उनकै भतिजमाथी प्रहरीले शंका गर्यो । प्रहरीको अनुशन्धान उनकै भतिज निर्मल केसीमाथी सोझिएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । पक्राउ परेका निर्मल विरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले सोमबार गीताकै भतिजा निर्मललाई जन्मकैदको सजाय माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। उक्त मुद्दामा मंगलबारबाट अदालतमा बयान र पुर्पक्षको बहस चलिरहेको छ । पक्राउपछि गरिएको बयानका क्रममा उनले गीतालाई आफूले नै सि’ध्याएको स्वीकार गरिसकेका छन्। निर्मल र गीताबीच चार वर्षदेखि लगातार शा’रीरि’क स’म्ब’न्ध रहेको पाइएको छ।
घटना भएकै दिनपनि आफूहरुबीच शा’रीरि’क स’म्ब’न्ध भएको निर्मलले बताएका छन्। उनीहरुबीच विगत चार वर्षदेखि यस्तो स’म्ब’न्ध रहेको समेत खुलेको छ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अनुसन्धानका क्रममा निर्मलले प्रहरीलाई दिएको बयान यस्तो छः
घट्नास्थलमा छरिएको अवस्थामा फेला परेको भनिएको नागरिकतासहितको ब्याग, जुत्ता, परिचय पत्र, पहेँलो कपडाको सल मृतक गीता केसीको हो। घटनास्थल नजिकबाट बरामद गरेको नोकिया कम्पनीको अगाडीको सिसा फुटेको मोवाईल मैले नै प्रहरीलाई देखाइदिएको हो। घटनाको समयमा मैले प्रयोग गरेको मेरो बा९३प ४६२३ नम्वरको मोटरसाइकल समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। काकीले विगत २ वर्षदेखि अल्का अस्पतालमा हाउस किपिङ्गको काम गर्न थाल्नु भएको थियो। मैले आफ्नो मोटरसाईकलमा राखेर काकीलाई काममा पुर्याउने र घरमा ल्याउने गर्दै आइरहेको थिएँ।
सोही क्रममा २०७७ भदौ १७ गतेका दिन बिहानै मैले काकीलाई फोन गरेर घुम्न जाऔं भन्दा काकीले सहमति जनाउनु भयो। दिनको अन्दाजी सवा एक बजेतिर काकीलाई मोटरसाइकलमा राखेर म भैंसेपाटीबाट उकालो बाटो लागें। हामीले ४ बर्ष अघिदेखि स’म्बन्ध राख्दै आएका थियौँ । त्यो दिनपनि मेरो योजना थियो ।
एकान्तकुनास्थित पेट्रोलपम्पमा पुगेर मोटरसाइकलमा पेट्रोल राखेपछि मैले काकीलाई आज लेलेतिर घुम्न जाऔं है भन्दा काकीले हुन्छ भन्नु भयो। त्यसपछि लेलेतिर घुमफिर गरी साँझ घर फर्कंदै थियौं। चापागाउँतर्फ आउने क्रममा लेले भञ्ज्याङ्गमा पुगेपछि काकीसँग शा’रीरि’क स’म्प’र्क रा’ख्ने सोच बनाएँ। मोटरसाइकल भञ्ज्याङ्गबाट मोडेर जंगलको बीच भागको बाटोमा पुर्‍याएपछि सहमतिमा शा’री’रि’क स’म्प’र्क गरेँ।
शा’री’रि’क स’म्प’र्क राखेपछि कुराकानी हुँदा काकीले भन्नुभयो, ‘मलाई आज घरमा जान मन लागेको छैन।’ मैले किन भनि सोध्दा काकीले भन्नुभयो, ‘मैले घर, बालबच्चा र तपाईंलाई छोड्न सक्दिनँ र मलाई माया गर्ने अरु मानिसहरूलाई पनि छोड्न सक्दिनँ, म’र्‍यो’ भने आनन्द हुन्छ जस्तो लागेर जी’वन नै फ्या’कौँ झै लाग्छ।’** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
काकीको त्यस्तो कुरा सुनेर म छाँगाबाट ख’सेजस्तै भएँ। मैले काकीलाई आफ्नो श्रीमतीलाई भन्दा बढी माया गर्थेँ, समय दिन्थेँ, हरेक ईच्छा आकांक्षा पुर्याउने गरेको थिएँ।
र, पनि अरु मानिसहरूसँग स’ल्कि’एको कुरा सुनेर काकीप्रति घृ’णा जा’ग्यो। आ’वे’गमा यसलाई यही एकान्त जंगलमा सि’ध्या’एर फा’ल्छु’ भन्ने सोच आयो। र, मैले उभिएर बसेकी काकीको ग’लामा बे’रि’एको सललाई पछाडीबाट दुवै हातले समाती का’कीको घाँ’टी’मा क’हि’बे’र जो’डले क’से’पछि काकीको प्रा’ण’ गयो।
त्यसपछि लाश कसैले देख्छ कि भन्ने डरले बाटो छेउको भी’रबाट ध’केलेर जंगलको झाडीतर्फ प’ल्टाएँ। जंगलको भिरालो ठाउँबाट बेगले गु’ल्टिँदै लाश तल बाटोबाट नदेखिने ठाउँमा पुग्यो।
मोटरसाईकलको ह्याडलमा झुण्ड्याएको काकीको खैरो रंगको लेडिज व्यागमा रहेको काकीको मोवाइल झिकेर व्याग जंगलको झाडीमा फा’लें। मोवाईल आफ्नो गोजीमा राखेर हतार हतार मोटरसाईकल चलाएर बाटो लागें।
केहि अगाडी आईपुग्दा काकीको मोवाईलमा फोन आयो। तर मैले फोन उठाइनँ। मोवाईलको कारण फसिने ड’रले मैले गोजीमा राखेको मोवाईल समेत त्यही जंगलतर्फ फ्याँकें। त्यसपछि सरासर आफ्नो घरमा आएर बसें।
त्यही दिन बेलुकासम्म पनि काकी घरमा नआएको भनि काकीको सानी छोरीले मलाई फोन गरेपछि काका शिवशरण केसीले मलाई शं’का गरे कि भनेर काकालाई भेट्न गएँ।
काकालाई भनेँ, ‘दिउँसो काकीलाई अल्का अस्पताल नजिक पुर्‍याएर फर्केको थिएँ, यतिखेरसम्म त आईपुग्नु पर्ने।’ फोन गरेर बुझ्छु भनेर अल्का अस्पतालमा काम गर्ने काकीका साथीहरूलाई समेत फोन गरी सोधी खोजी गरेँ। प्रहरीले खोजतलासको क्रममा काकी गीता केसी हराएको र १७ गते दिउँसो काकीलाई मैले मोटरसाईकलमा लिएर हिंडेको कुरा थाहा पाएछ।
प्रहरीले मलाई भैंसेपाटी चोकबाट लिएर गएपछि मलाई अब फ’सि’यो भन्ने लाग्यो। प्रहरीले सोधपुछ गर्दा मैले काकीलाई ‘मा’रे’को हुँ ‘भनि वास्तविक कुरा बताएँ।’** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ : हेर्नुहोस् कुन देशको कति छ
पुजा शर्मा लेख्छिन् ‘मान्छेको मनोविज्ञानमा असर गर्नेगरि बिरोध गर्न कसैलाई छुट छैन’
वडाध्यक्ष सहित पुरै गाउँलेहरुले लखेटी लखेटी मा’रेरै छोडे बिचरा यी २१ वर्षीय नवराजलाइ
नेहा कक्कड़ र रोहनको विवाहको खुल्यो राज ! २१ तारिखमा के हुँदैछ ?